The Power (2021) | MM Movie Store
ဒီဝိ့အဖဟော ပိုကျဆံအရမျးခမျြးသားပါတယျ…အဓိက ခမျြးသားတဲ့အကွောငျ့အရငျးကတော့မူးယဈဆေးဝါးဖွနျ့ဖွူးရောငျးခခြွငျးကွောငျ့ပါပဲ…..ဒါ့ကွောငျ့ မွို့မကျြနှာဖုံးလိုဖွဈနတေဲ့ ဒီဝိ့အဖကေို ဂိုဏျးတဈခုကနေ စီးပှားရေး စပျတူလုပျဖို့ကမျးလှမျးလာတယျ…ဒီလိုကမျးလှမျးမှုကို ဒီဝိ့အဖဖွေဈသူ ကာလီဒတျက လုံးဝလကျမခံပါဘူး….
နယျကြျောမရတဲ့အပွငျ သူတို့ပစ်စညျးတှဟောလညျးတိုးမပေါကျတာကွောငျ့ တဈဘကျအဖှဲ့အစညျးက ကာလီဒတျကို လုံးဝအငွိုးထားပါတယျ…ဒီဝိ့ကတော့ သူ့အဖသေဘောထားတှကေို ဝငျရောကျစှကျဖှကျလမေ့ရှိပါဘူး…တဈနေ့ ဒီဝိ့အဖကေိုကိုတဈဖကျဂိုဏျးက လုပျကွံသတျဖွတျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့….
ဒီဝိတဈယောကျ ကြားနာတဈကောငျလို ဖွဈသှားပါတော့တယျ..ဘယျလိုတှပှေဲကွမျးမလဲဆိုတာကိုတော့….နငျးကနျကွမျးတဲ့ Action ကားမို့ ဘောလိဝုဒျပရိတျသတျမြား လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျး ….
ဒီဝိ့အဖေဟာ ပိုက်ဆံအရမ်းချမ်းသားပါတယ်…အဓိက ချမ်းသားတဲ့အကြောင့်အရင်းကတော့မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းကြောင့်ပါပဲ…..ဒါ့ကြောင့် မြို့မျက်နှာဖုံးလိုဖြစ်နေတဲ့ ဒီဝိ့အဖေကို ဂိုဏ်းတစ်ခုကနေ စီးပွားရေး စပ်တူလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာတယ်…ဒီလိုကမ်းလှမ်းမှုကို ဒီဝိ့အဖေဖြစ်သူ ကာလီဒတ်က လုံးဝလက်မခံပါဘူး….
နယ်ကျော်မရတဲ့အပြင် သူတို့ပစ္စည်းတွေဟာလည်းတိုးမပေါက်တာကြောင့် တစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းက ကာလီဒတ်ကို လုံးဝအငြိုးထားပါတယ်…ဒီဝိ့ကတော့ သူ့အဖေသဘောထားတွေကို ဝင်ရောက်စွက်ဖွက်လေ့မရှိပါဘူး…တစ်နေ့ ဒီဝိ့အဖေကိုကိုတစ်ဖက်ဂိုဏ်းက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့….
ဒီဝိတစ်ယောက် ကျားနာတစ်ကောင်လို ဖြစ်သွားပါတော့တယ်..ဘယ်လိုတွေပွဲကြမ်းမလဲဆိုတာကိုတော့….နင်းကန်ကြမ်းတဲ့ Action ကားမို့ ဘောလိဝုဒ်ပရိတ်သတ်များ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း ….